CIN Khabar सी विचारको बहस,संयोग र शङ्काको सुविधा
सी विचारको बहस,संयोग र शङ्काको सुविधा सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनको निर्णयः विचारधाराको निर्यात गर्ने (अडियोसहित)
शोबिता रिसाल शनिबार, असोज ११, २०७६, ०३:४१:००
काठमाडौँ । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) का विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओको उपस्थितिमा नेकपाले यसैसाता ‘सी विचारधारा’ माथि बहस काठमाडौँमा चलायो ।
चीनियाँ पार्टीको विचार बारे बहस गर्दै आपसी सम्बन्ध विस्तारमा हस्ताक्षर गरेपछि काँग्रेसले विरोध गर्‍यो र यस बारेमा पक्षविपक्षबाट तर्कवितर्क भइरहेका छन् ।
नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ विचारमाथि बहस हुँदैमा सीपीसीको विचार अबलम्बन गरेको मान्न नहुने बताउनुहुन्छ ।
'पार्टीहरुबीच आपसमा छलफल,बहस तथा विचारहरु आदानप्रदान गर्न सकिन्छ तर त्यसो भन्दैमा त्यतैतर्फ ढल्कियो भन्ने हुँदैन।'प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ,'नेकपा छुट्टै पार्टी हो,उहाँहरु छुट्टै । हामी त्यतातर्फ ढल्कदैनौँ ।'
चीन मामिलाका जानकार टङ्क कार्की भने यसलाई अनावश्यक शङ्का भन्नुहुन्छ । 'यो चीनको समृद्ध विचारधारा हो, जब राजदूतले नै हामी कसैलाई विचार लाद्दैनौँ भनिसकेपछि फेरि के को शङ्का ?' सीआईएनसँग कुरा गर्दै कार्कीले प्रश्न गर्नुभयो ।
चीन आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले विश्वमा शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदाउँदै छ ।
अमेरिकापछिको शक्तिशाली देश बन्दै गर्दा चीनले के राजनितिक विचार पनि बिस्तार गर्न चाहेको देखिन्छ ? जवाफमा राजनितिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले सीआईएनसँग भन्नुभयो,'दुई वर्षअघि सीपीसीको १९ औँ महाधिवेशनले विचारधाराको निर्यात गर्ने विषय प्राथामिकताका साथ पारित गरेको थियो । त्यसैले उसले विश्वभरि नै आफ्नो विचार बिस्तार गर्न चाहन्छ । नेपालमा मात्रै होइन, यसले नेपाललाई केही फरक पार्छ भन्ने विषयचाहिँ बहसको विषय हुन सक्छ ।'
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रपति सी जिन फिङलाई माओ, देङ सियायो पिङपछिका शक्तिशाली नेताका रूपमा चित्रित गर्दै उनको विचारलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
कतिपयले यस्ता छलफल र बहस हुनु सामान्य र विश्वभरको प्रचलन भनेका छन् । नेपालमा हालै चलेको सी विचारधारमाथिको बहस बारेमा बहस तातिँदै गर्दा नेपालस्थित चिनियादूतावासले पनि आफ्नो मुलुक विचारको निर्यात गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्टिकरण दिएको छ ।
फिङको भ्रमणको अवसर पारेर नेपालमा देखिएको चहलपहल विचारधारा निर्यातको एउटा शिलशीला बुझ्न थालिएको देखिन्छ । विश्लेषक लोकराज बराल भने सी बो राजनितिक पथबारे बहस हुँदैमा केही नबिग्रने धारणा राख्नुहुन्छ ।
'अन्तराष्ट्रिय अभ्यासमा पनि पार्टी, पार्टीका बीचमा छलफल तथा वैचारिक सहमतिहरु हुन सक्छन्, तर यो छलफल प्रधानमन्त्रीकै तहबाट भएको र उहाँले नै नेतृत्व गरेको पार्टीसँग जोडिएकाले ठूलो रुपमा हेरिएको मात्रै हो, अन्यथा यसलाइ बृहत रुपमा लिनु जरुरी छैन ।' बरालले भन्नुभयो ।
अन्य देशका राष्ट्रप्रमुख नेपाल आउँदा सुरक्षाका विषयलाई प्राथामिकतामा राख्ने गरिएको थियो । तर चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणको अवसरमा मात्रै नेकपाले किन विचारधाराकै बारे बाक्लो बहस गर्‍यो ? धेरैका मनमा यो प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, असोज ११, २०७६, ०३:४१:००